umvundla wokutyisa i-pellet mill,Uyenza njani i-pellets yokondla imivundla
Indlela esisiseko yokwenza i-pellets zomvundla
Ubuncinci beemfuno zesondlo somvundla kwisondlo sokutya zi 14% ifayibha emdaka, 2% amanqatha, kunye neproteyini engalunganga 12%. Qinisekisa ukuba ukutya okuza kukuvelisela okungenani ukudibana okanye okungcono kwangoku, Dlula elona nani lincinci lingezantsi le-fiber, kodwa gcina iprotein kunye nenqanaba lamafutha asezantsi.
Inqanaba le-fibre ye 15% ukuba 17% kwanele. Inqanaba elikhulu kuno 17% igcina ukuzuza ubunzima obungayinqweneleka umvundla wesilwanyana ongabandakanywanga kunye nenqanaba le-fiber 22.5% kwaye aphezulu asetyenziselwa ukunciphisa ukutyeba kakhulu kunye neebhanti zeenwele.
Amanqanaba eprotein kufuneka 15% ukuba 19%. Qiniseka ukuba inqanaba le-fiber likhulu kwinqanaba leprothini. Iproteni ephezulu kakhulu ekutyeni yenza inani elikhulu le-ammonia kumchamo. Kungangcono ukugcina iprotein ikufuphi 15%.
Amanqanaba eoyile kufuneka abe esezantsi, ngeenxa zonke 3% okanye ngaphantsi. Ngaphezulu komxholo wamanqatha e-pellet kubi ngakumbi kune-bunny yakho, kuba kunokubangela ukukhuluphala. Gwema iipellets ezininzi zamandongomane, imbewu, njl. kuyo, akulunganga ukondla ngenxa yomxholo onamafutha aphezulu.
Kuba siwazi umatshini kunye nokuyilwa kokwenza iirobber pellets, ungathandabuzi ukwenza into. Imivundla iya kubavuyisa kakhulu
Iingcebiso malunga nokondliwa kweepellethi zoNogwaja
Nje ukuba ugqibe ukuba loluphi uhlobo lwepellethi ozithengayo, Nceda uqiniseke ukuba uhlala usebenzisa uphawu olufanayo kunye nohlobo lweepellethi. Eminye imivundla ayenzi kakuhle kutshintsho olukhawulezileyo ekutyiseni kwaye inokubangela iingxaki zokugaya. Ukuba kufuneka utshintshe kufuneka udibanise ukutya okudala kunye nokutya okutsha ukuze ufumane umvundla wokugaya ukutya osetyenziselwe ukutya okusha. Qiniseka ukuba unokwanela kokutya okudala ukuze uguquke kancinci ukuya kukutya okutsha. Yenza oku ngokuthe ngcembe ixesha elingaphezulu kweveki. Ukuba kuyenzeka, Unokuthenga nje umbane weFlat Flates ePellet Mill kagesi, indawo encinci yokugubungela, Ukuchitha iindleko kunye nokusebenzisa okuncinci ukuvelisa i-pellets yakho yokutya komvundla ukunqanda utshintsho.
Gcina iipellets kwisitya esivaliweyo kwindawo epholileyo, indawo eyomileyo. Ngale ndlela iipellets ziya kukhuselwa kumdaka, ukukhanya kwelanga, mnyama. Zama ukugcina isiciko sivaliwe kwaye oku kuya kunciphisa ithuba leentsholongwane.
Musa ukudibanisa ingqolowa kunye nembewu kunye nepellets zokutyisa zomvundla, njengoko umvundla uya kukhetha izinto azithandayo aze ashiye ezinye, kuthetha ukuba ayizukufumana ukutya okulingeneyo. Sukugqithisa ukondla umvundla wakho. Ukutyeba kakhulu kunemivundla kunokubangela ixesha elifutshane kakhulu lobomi. Ubuninzi be 1/8 yekomityi nganye 1.8 I-kg yobunzima bomzimba wepellet fiber ephezulu ngosuku ilungile. Koomvundla abasakhulayo, iipellets zinokunikwa ukhetho olukhululekileyo kude kube 6 ukuba 8 iinyanga zobudala, emva koko unciphise ukuya kwisixa semali yolondolozo njengoko ngasentla.
Izibonelelo zePellets zoKondla ngokuKhulisa umvundla
Ekuqaleni, ukulunga okuhle. Ngexesha pelletizing, kukho inkqubo ebizwa ngokuba kukudibanisa kwesitatshi, ezisa incasa emnandi ye iipellets zokutya kunye nokunyusa amandla e-pellets ukukhuthaza umdla we-rabi. Nje ngeziphumo, ukutya ukutya kwemivundla kunganda 10%-15%.
Isibini, ukuqina kwepellets. Ukuqina kweepellets kuqina kakhulu xa kuthelekiswa nomgubo oxutywe nepowder, ezilungele ngakumbi imivundla enomdla yokutshixiza amazinyo awo ngezinto ezinzima.
Isithathu, inokuthintela ngokufanelekileyo imivundla kwisondlo seswekile yesifo ekubangelwa kukutya.
Isine, phucula umgangatho wokugaya ukutya, kwaye ilungile ukugaya esiswini kunye nokungenisa imivundla.
Isihlanu, Ukubulala iintsholongwane kunye nokubulala iintsholongwane, kunciphise ukwanda kwesifo. Ukutya kwePellet, emva kwexesha elincinci lobushushu obuphezulu buye phezulu 70 ℃ -100 ℃ Kwinkqubo yokucinezelwa, inokubulala inxenye yeqanda leparasite kunye ne-pathogenic microorganisms, okwenza isifo somvundla sincitshiswe kakhulu. Ngaphandle koko, Kuyimfuneko ukomisa iipellethi zokutya ngexesha ukuthintela ukungaboli.
Ukwengeza, Ukusetyenziswa kweepellets zokutya kunokunciphisa inkunkuma yokutya kwaye oku kukonga iindleko kubagcinisi bomdiliya.